TTSweet: စားပွဲပေါ်မှ ချောကလက်လေးများ ...
Posted by T T Sweet at 4:12 PM
ခနွဲ April 6, 2011 at 6:01 PM
အဲဒီ ချောကလက်စားချင်တယ်။ အစစအရာအရာ အဆင်ပြေပါစေခင်ဗျ
ဆုမြတ်မိုး April 6, 2011 at 6:23 PM
JuneOne April 6, 2011 at 6:30 PM
တို့အရင်လုပ်ခဲ့တဲ့ ကုမဏီ မှာလဲ နောက်ဆုံးနေ့မှာ ချောကလက်များ လိုက်ဝေပြီး နှုတ်ဆက်တယ်။
သက်ဝေ April 6, 2011 at 6:37 PM
ကိုယ်ကတော့ အလုပ်မထွက်ပေမယ့် စာပွဲပေါ်မှာ နေ့တိုင်း ချောကလက်တွေ ရှိတယ်... ၈ နှစ်ခွဲဆိုတဲ့ သံယောဇဉ်ကို တွေးနေမိတယ်... ရှေ့ဆက်ရမယ့် ခရီးအတွက် အစစ အဆင်ပြေစေဖို့ ဆုတောင်းတယ် သူငယ်ချင်းရေ....
ဒီကြားထဲ လာတွေ့ပါဦးမယ်...း))
sonata-cantata April 6, 2011 at 6:48 PM
တီဆွိရေ..စဉ်းစာနေမိတာ...လူတိုင်းမှာ ခေါင်းတလုံး နှလုံးသားတခုစီသာ ပါကြပေမဲ့ ခံစားတတ်သူများကြတော့ ရင်ဘတ်ကြီးနဲ့ အပြည့် တနင့်ကြီး..ခံစားရတယ်နော်..တယောက်နဲ့တယောက် မတူဘူး လို့
ပွင့်မြုးဇင် April 6, 2011 at 7:31 PM
၈နှစ်ခွဲကြီးတောင်ဆိုတော့ သံယောဇဉ်တွေတွယ်နေရောပေါ့.. ခုလိုကြီးခွဲရတော့ လွမ်းစရာကြီးနော်..
ကိုဇော် April 6, 2011 at 9:00 PM
အရာရာ အဆင်ပြေ ပျော်ရွှင်ပါစေ အစ်မရေ . .
ဖိုးတုတ် April 6, 2011 at 10:39 PM
မဆွိကို မမြင်ဖူးပါ ၊ မဆွိပို.စ်မှာ ကွန်မန်.ရေးတာမကြာသေးပေမဲ့ ခင်မင်မိပါတယ် ၊ ဘလော့ဂါတော်တော်များများကို မတွေ.ဖူးပါ ၊ ချွင်းချက်အနေနဲ.စလုံးမှာ ပွဲတိုင်းကျော်တဲ့ အမျိုးသား ဘလော့ဂါတစ်ယောက်ကိုပဲအပြင်မှာတွေ.ဖူးပါတယ် ၊ ပစ်မလွဲကြီးဆိုတော့ မှတ်မိပါတာပေါ့၊ နောက်ဘလော့ဂါ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကိုတော့ ဘလော့မှာတင်ထားတဲ့ ဓါတ်ပုံကိုတွေ.ဖူးတာပါ၊ အဲဒီဓါတ်ပုံတင်ပြီး စင်ကာပူမြို. လယ်က အော်ချတ်မှာ ရေကြီးတော့တာပဲ ၊ အဲဒီ့ဘလော့ဂါ တစ်ယောက် ဟိုတလောက ဂျပန်ကို သွားလည်သလားလို.တောင် သံသယဖြစ်မိပါတယ် ၊ ဟိုတလောက ဂျပန်မှာ ငလျင်နဲ. ဆူနာမီ ဒဏ်ခံလိုက်ရလို.ပါ ၊ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အင်တာနက်မှာဆုံတဲ့ ဘလော့ဂါများကို ခင်မင်လေးစား မိပါတယ် ၊ ရတဲ့အချိန်နည်းနည်းလေး ထဲက ရေးနိုင်တဲ့စွမ်းရည်ကိုလည်း အသိအမှတ်ပြုမိပါတယ် ၊
အလုပ်တစ်ခုတည်းမှာ ၈နှစ်ဆိုတဲ့ အတိုင်း အတာကလည်း တော်တော်ကြာပါတယ် ၊ အလုပ်သံယော်ဇဉ်တော့ဖြစ်မိမှာ အမှန်ပါပဲ ၊ မဆွိကိုယ်တိုင်လည်း စိတ်မကောင်းဖြစ်နေနိုင်ပါတယ် ၊ ဒါမှာမဟုတ် ဒီလောက် stress များလှတဲ့ စလုံးက လွတ်ပြီဟေ့ ကျွတ်ပြီဟေ့ဆိုပြီး celebration လုပ်နေတာလဲ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်၊
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တိုးတက်မူအတွက် သြဇီ ကိုပြောင်းသွားတဲ့ အတွက် ၀မ်းသာမိပါတယ် ၊
ကျွန်တော့်ကွန်မန်.က အပေါ်ကသက်ဆိုင်သူ ဘလော့ဂါများရဲ့ စိတ်ကို အနှောက်အယှက်ဖြစ်ခဲ့ရင်လဲ ကြိုတင်တောင်းပန် အပ်ပါတယ် ၊ ကြုံတုန်း ရယ်စရာအနေနဲ. မန်.တယ်လို.ပဲ ယူဆပေးပါခင်ဗျာ ...
သြဇီကနေ တင်မဲ့ပို.စ်အသစ်များကိုမျှော်နေပါ့မယ် ၊
သြဇီမှာ မဆွိနဲ. မိသားစုဝင်အားလုံး အစစအရာအရာ အဆင်ပြေပါစေလို. ဆုတောင်းအပ်ပါတယ် ၊
Shinlay April 7, 2011 at 1:05 AM
Angelhlaing(May everybody be happy and healthy! April 7, 2011 at 2:05 AM
မမရေ အဆင်ပြေချောမွေ့ပါစေလို့ အားပေးသွားရင်း ညီမလေး...
ဝက်ဝံလေး April 7, 2011 at 5:03 AM
ဟိုမှာ အခြေကျအောင် လုပ်ရဦးမှာ ဆိုတော့ မဆွီရေ အဆင်ပြေပါစေနော် .......
အဲဒီ ချောကလက်လေးတွေက အရမ်းစားကောင်းတယ် ချောကလက်ထဲမှာ အဲဒီ ချောကလက်ကို အကြိုက်ဆုံး
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) April 7, 2011 at 6:40 AM
ချောကလက်လေးတွေဟာ ပျော်ရွှင်ခြင်းအထိမ်းအမှတ်နဲ့သာ ပေးမယ်ဆို သိပ်ကောင်းမှာ
ခုတော့ ခွဲခွာခြင်း အထိမ်းအမှတ်ဖြစ်နေတယ်.
နေရာသစ်မှာ အစစ အဆင်ပြေပါစေ မမဆွိရေ။
ဘလော့ပေါ်မှာလည်း မကြာမကြာ ပြန်တွေ့ချင်ပါတယ်
မိသားစုအားလုံး ပျော်ရွှင်ကျန်းမာ စိတ်ချမ်းသာကြပါစေ
Myagreen April 7, 2011 at 10:55 AM
Me April 7, 2011 at 12:24 PM
မဆွိရဲ့စာလေးတွေ လာဖတ်နေကျမို့ စိတ်ထဲမှာ တိတ်တိတ်လေး ခင်နေတယ်။ အားလုံးကဲ့သို့ နေရာသစ်မှာ အဆင်ပြေ ပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်း တောင်းလိုက်ပါတယ်။ အပြောင်းအလဲကာလရဲ့ ဖြစ်မြဲကြုံမြဲ အဖုအထစ် ကလေးများကိုတော့ ရင့်ကျက်တဲ့အတွေ့အကြုံ၊ ပေါ့ပါးလွပ်လပ်တဲ့အမြင်၊ အားကိုးရတဲ့အဖေါ်မွန် တို့နဲ့အတူ အလွယ်တကူ ကျော်ဖြတ်နိုင်မယ်ဆိုတာ အသေအချာ ယုံကြည်ပါတယ်။
T T Sweet April 8, 2011 at 9:01 AM
ကိုဇက်ရဲ့ ကွန့်မန့်ကို ရုတ်တရက်မြင်လိုက်တော့ ဟာ ငါဘယ်အချိန်က ပို့စ်အသစ်တင်လိုက်ပါလိမ့်လို့း) ဟိုရောက်ရင်လဲ ဟိုကအတွေ့အကြုံတွေ ကမောက်ကမတွေ တင်ဖြစ်ဦးမှာပါ။ အားပေးမှုအတွက် ကျေးဇူးအထူး ကိုကိုဇက်။
ဂျွန်ဝမ်းပြောမှပဲ ချောကလက်နဲ့ နှုတ်ဆက်တာ ကုမ္ပဏီတိုင်း ထုံးစံလားတိဘူးနော် ...
အန်တီတက်ဂ်ဝေ ပို့စ်တစ်ပုဒ် အကြွေးကျန်နေသေးတော့ အကြွေးရှင်ကို တွေ့လိုက်သလို လန့်တွားတာပဲ ... သများမှာ ..
အလကားစတာနော် ... အိမ်လာလည်ဦး ..
ချောကလက်နှိုက်စားသွားသူများ၊ လာရောက်အားပေးဆုတောင်းပေးကြသူများ ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ် ...
စော(အဝါရောင်မြေ) April 8, 2011 at 4:20 PM
ခွဲးကာနီး ချောကလတ်ပေးတာ ကောင်းမွန်သော ခွဲခွာမှုဖြစ်ပါစေ ဆိုတဲ့ အထိမ်းအမှတ်ဖြစ်မှာပါ။
lara April 9, 2011 at 1:07 AM
စလုံးကလူတွေကို ကျုးပစ်မှာ ဆက်ပြီးကူညီပေးပါနော် ။All the best to t t seweet , u chaint,ju
All the best to you 3:)
New year,new country,new atmosphere n .........not new U Chaint.Just kidding:DWhen u have chance come n enjoy land of chocolate.
pls let me know what font are you using?
I cannot read your blog.